Haweeney maalmo ku xayirneyd wiishka dabaqyada - BBC News Somali
Haweeney maalmo ku xayirneyd wiishka dabaqyada
Image caption Wiish
Mas'uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa sheegay in haweeney lagu magacaabao Marites Fortaliza lasoo badbaadiyay kadib markii laba maalin oo ah maalmaha fasaxa ee sabtida iyo axadda ay ku xayirneyd wiishka dhisme uu leeyahay nin maalqabeen ah oo ay ka shaqeeneysay.
Marites oo 53 jir ah ayaa gashay wiishka dhismahan oo ku yaala xaafadda Manhattan ee magaalada New York, kaasi oo uu leeyahay bangiga Warren Stephens. Kooxaha dad damiska ay ka jawaabay wicitaan degdeg ah oo loo soo diray maalinta isninta, waxaana halkaasi ay kasoo badbaadiyeen gabadhii ku xirneyd wiishka.
Qoyska gabadhna ayaa sheegay in Marites ay fuuq-baxday, haatan na la seexiyay isbitaal oo ay soo kabaneyso.
Mas'uuliyiinta magaalada New York ayaa sidoo kale sheegay in haweeneydan ay ku xayirantay inta u dhaxeysa dabaqa saddexda iyo kan afaraad ee dhismaha.
Lahaanshaha sawirka Haweeney maalmo ku xayirneyd wiishka dabaqa
Image caption GOOGLE MAPS
Qoyskeeda ayaa sidoo kale sheegay in ay ku maqnaayeen magaalo kale oo aysan xitaa warba ka heynin in gabadhooda ay timid iyo inkale.
Waaxda dhismayaasha ee magaalada New York ayaa shirkadda iskaleh dhismahaasi ku eedeesay inay ku xadgudbeen shuruucda u degsan Mareykanka, kuna amartay in dib u eegis lagu sameeyo wiishka dhismahaasi, waxaana ilaa iyo iminka aanan la ogeyn waxa keenay cilladda.